मार्क्सवाद मात्र उत्तर होइन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
समाजमा ‘रिभोलुसन’ मात्र हुँदैन, ‘इभोलुसन’ पनि हुन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र निर्माण गरेदेखि नेपाली समाजमा ‘इभोलुसन’ आफ्नै ढङ्गले भैरहको छ ।
पुस १९, २०७६ रमेश के.सी.
के सम्पूर्ण समाज मार्क्सवादी हुनसक्छ ? नेपालको अविकासको रोग मार्क्सवादले निको पार्छ ? केही अन्तर्राष्ट्रिय र केही घरेलु साम्यवादी आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर लिइएका अन्तर्वार्ता र लेखहरूको सँगालो यो पुस्तकको महत्त्व यसकारणले पनि छ कि अहिले नेपालमा मार्क्सवादी–लेनिनवादी र माओवादीहरूको निर्वाचित सरकार छ ।
विश्वभर मात्र होइन, छिमेकी भारतको हालैको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित कम्युनिष्टहरूको सन्दर्भमा नेपाली साम्यवादीहरूको सत्तारोहण उनीहरूका लागि उत्साहजनक नै छ । तर के उनीहरू मार्क्सवाद अनुसार शासन गरिरहेका छन् ? उदारवादीहरू मार्क्सवादी साम्यवादी शासन प्रणाली जगैदेखि अधिनायकवादी भएको बताउँछन् । तर सन् ९० को उथल–पुथलपछि नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादमार्फत फुकुयामावादी वामपन्थी बनेका एमालेहरू निर्वाचनमा नै रमाए । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व परित्याग गरे । वर्गको होइन, सम्पूर्ण जनताको राजनीति गरे । तर सन् ९० भन्दा अघिका साम्यवादी सत्ताहरू सोभियत संघ र पूर्वी युरोपबाट तासको पत्ता ढलेझैं ढलेपछि साम्यवादीहरूमा उदार दर्शनप्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न भयो । त्यही भाव एमालेमा पनि देखियो ।
मार्क्सवादलाई मानव समाजको अन्तिम वैज्ञानिक दर्शन र विश्व श्रमजीवीको जीवन दर्शन बनाउने उनीहरूको उद्देश्य असफल भैसकेको छ । वर्गको राजनीतिमा जोडदिने उनीहरूको समाजवाद वर्ग उन्मूलन भई सबै अन्तरविरोधहरूको अन्त्यसँगै पृथ्वी मानवजातिको भूस्वर्ग हुने दाबी पनि असफल भयो । उदारवादीहरूको प्रजातन्त्र र बजार अर्थतन्त्रको अन्तिम विजय भनिएको इतिहासको अन्त्य पनि असफल सावित भएको छ । लाग्छ, विश्वका जनता दुवै खाले अन्त्यवादमा विश्वास गर्दैनन् ।
नेपालको साम्यवादी आन्दोलनको जग सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्ति र १९४९ को चिनियाँ क्रान्तिबाट प्रभावित युवाहरूले बसालेका हुन् । साम्यवादको एउटा मात्र हाँगा थिएन । शीतयुद्ध कालभरि सोभियत र चीनको धुरीमा नेपाली साम्यवादीहरू विभाजित भए । चीनको माओ विचारधाराबाट प्रभावितहरूले १० वर्षे विद्रोह गरे । जुन २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै टुंगियो । जसले राजतन्त्रको उन्मूलन गर्दै राष्ट्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ उन्मुख गरायो । यिनै घटनाक्रमहरूको समाजशास्त्री मिश्रले मिहिन अध्ययन गरेका छन् । नेपालमा पुँजीवादले पारेको प्रभाव, लोकतन्त्रको वैचारिकी, लेनिनले गलत बुझेका मार्क्स र मार्क्स नभएको वर्तमान समाजको सघन विश्लेषण गरिएको छ ।
समाजमा ‘रिभोलुसन’ मात्र हुँदैन, ‘इभोलुसन’ पनि हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र निर्माण गरेदेखि नेपाली समाजमा ‘इभोलुसन’ आफ्नै ढङ्गले भैरहको छ । यिनै ‘इभोलुसन’लाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट मिश्रले सैद्धान्तीकरण गरेका छन् । नेपाल सामन्तवादबाट पुँजीवादतर्फ उन्मुख समाज हो । यो अन्धविश्वासी र अवैज्ञानिक पनि छ । तर पुँजीवादका झिल्काहरू देखिएको नेपाली समाजको विकास पुँजीवादतर्फ नै हुने हो । स्वयं मार्क्सले सामन्तवादभन्दा पुँजीवाद प्रगतिशील व्यवस्था भनेका थिए । तर समाजशास्त्री मिश्र सामाजिक लोकतन्त्रको वकालत गर्छन् । जुन न्यायमूलक समावेशी, प्रजातान्त्रिक र समतामूलक हुन्छ । यदि यो उद्देश्य नेपालका सत्तासीन साम्यवादीहरूले पूरा गरे भने धन्यवाद दिनैपर्ने हुन्छ । तर दुई वर्षको सत्ता सञ्चालनले त्यस्तो छाँट देखिएको छैन ।
मार्क्सवादप्रति उनीहरू आदर्श त देखाउँछन्, तर उनीहरू वर्तमान विश्व व्यवस्थाभित्रै नवउदारवादी अर्थसंरचना भित्रबाट सञ्चालित छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा तब सामन्तवाद कमिसन र भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेर देखिरहेका छन् । राष्ट्रवादी देखिएको वर्तमान नेकपाको नेतृत्व लोकप्रियतावाद र कतिपय गैरप्रजातान्त्रिक कार्यको अगुवा देखापरेको छ । के यस्तोमा लोकतन्त्र फस्टाउँछ ? त्यसैले आजको मार्क्सवादलाई वर्तमान सरकारको क्रियाकलापले खण्डन गर्छ । विश्वमा नवउदारवादी पुँजीवाद मात्र होइन कि ‘टेक’ कम्पनीहरूमार्फत आएको जासुसी पुँजीवादको जगजगी भएको बेला यो सरकार नाम मात्रको मार्क्सवादी बनेको छ । मार्क्सवादको कुरा गर्ने हो भने आजसम्मको मानव अनुभवले के देखाएको छ भने जीवन, समाज र प्रकृतिको फेनोमेनाहरू एउटै वादभित्र कहिल्यै अटाउँदैन । त्यो समय–सापेक्ष मात्र हुन्छ । यसर्थ समाजशास्त्री मिश्रले यही परिवर्तनकारी चक्रलाई बुझे र शास्त्रीय मार्क्सवाद नभनी आजको मार्क्सवाद भनेका हुन् ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा ‘दि राइज एन्ड फल अफ कम्युनिजम’ का लेखक आर्ची ब्राउनले नेपालमा साम्यवादीहरूप्रति जनताको आकर्षणको मुख्य कारण गरिबी भएको उल्लेख गरेका छन् । गरिबी, विभेद, शोषण र दमनले गर्दा नेपालका जनता साम्यवादप्रति आकर्षित हुनुले मात्रै होइन कि ती कुराको अन्त्यले साम्यवादी राजनीतिको औचित्य पुष्टि हुन्छ । त्यसैले साम्यवादी राजनीति पनि नेपालमा परीक्षणकालमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि आधा दर्जन साम्यवादीहरू प्रधानमन्त्री भए, तर जनताले भनेजस्तो परिवर्तन भएन । अझै पनि दलित, मजदुर, किसान, जनजाति र सीमान्तीकृत जनता न्याय पाउनसकेको अनुभूत गर्दैनन् । यसले आजको मार्क्सवाद भने पनि नेपाली साम्यवादीहरू दिशाहीन र सिद्धान्तलाई लागू गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भन्ने थाहा हुन्छ । उदारवादी भनिएको नेपाली कांग्रेस पनि सिद्धान्तविहीन र शक्तिका लागि राजनीति गर्नेहरूको दल बनेको छ । विगत ३० वर्ष शासन गरेको कांग्रेसले किन समाजलाई परिवर्तन गर्न सकेन ? राजनीतिक परिवर्तनमात्र सबै थोक होइन, सम्पूर्ण सामाजिक अवयवहरूको परिवर्तनमात्र साँचो परिवर्तन हो ।
अहिले हामी उत्तर विचारधाराको युगमा छौं । यो युग व्यवहारवादको युग हो । कुनै निश्चित विचार र आदर्शले मात्र समाजलाई हाँक्न सक्दैन भन्ने कुरा माओले क्रान्ति गरेकै देश चीनको उदयबाट प्रस्ट हुन्छ । उसले ल्याटिन अमेरिकी कर्पोरेटवाद, पूर्वी एसियाली एकाधिकारवाद र कल्याणकारी राज्यका उपायहरूलाई गुपचुप प्रयोग गरिराखेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको शासन भए पनि उनीहरू मार्क्सवादी नभएका कुरा हङकङका पूर्वगभर्नर र अर्क्सफोर्ड विश्वविद्यालयका पूर्वचान्सलर क्रिस प्याटन बताउँछन् । साँचो अर्थमा संसारमा मार्क्सवादी शासन छैन । वर्तमान विश्वलाई बुझ्न मार्क्सवाद अपर्याप्त हुन्छ । किनभने मार्क्स १९ औं शताब्दीका विश्व दृष्टिकोणका कैदी थिए । यसर्थ नेपालमा फुकुयामावादी वामपन्थीको बर्चस्व भयो भन्दैमा सबै कुरो मार्क्सवादी ढर्रामा भइराखेको छ भन्ने हुँदैन ।
निरंकुश राजतन्त्रलाई फ्याँकेपछि नेपालमा दलतन्त्र हावी भयो । विधिको शासन र पारदर्शिताभन्दा दलहरूको मनपरीतन्त्रले गर्दा कुशासनले दह्रोगरी जरा गाडेर बसेको छ । असल शासकले आफ्नो समाजको आद्यस्वरुप चिनेको हुनुपर्छ, अनिमात्र उसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ । जस्तो कि सिंगापुरका ली क्वान युले चिनेका थिए । उनले तपाईं केमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनी सोध्दा भनेका थिए, ‘म सामाजिक डार्बिनवादी हुँ । यस वादअनुसार जसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ वा समाजको गतिमा मिल्न सक्छ, त्यो मात्र सफल हुन्छ ।’ यसर्थ जनतालाई प्रतिनिधि र योग्य बनाइराख्न सक्नु नै नेतृत्वको गुण हो ।
हामी सिद्धान्तमा जेसुकै भनौं, नेपाली जनताको उन्नति, समृद्धि जेले गर्न सक्छ, त्यो नै उचित उपाय हो । साम्यवाद बिसौं शताब्दीको घटना हो । एक्काइसौं शताब्दीमा यसले आफूलाई सान्दर्भिक बनाउन सक्ने आधारहरू हुनुपर्छ । यसर्थ एउटा कालखण्डको सत्य राजनीति र समाज विज्ञानमा सधैंभरि सत्य रहिरहँदैन । पुँजीवादलाई वर्तमानमा निषेध गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका मिश्रका लागि पुस्तकभर मार्क्सवादको समकालीन सन्दर्भमा औचित्य पुष्टि गर्नमा रहेको छ ।
मार्क्सवादको बिसौं शताब्दीको प्रयोग र सिद्धान्तमा असहमत उनी चाहिँदैन कम्युनिष्ट पार्टी भन्दै सामाजिक प्रजातन्त्रको वकालत गर्छन् । हामीलाई लोककल्याणकारी र क्षमतामूलक राज्यको खाँचो भएको औंल्याउँछन् । १० वर्षे माओवादी विद्रोहको अर्थराजनीति केलाउँछन् । नेपाली साम्यवादीहरूको रूपान्तरणको विवरण पनि दिन्छन् । तर उत्तर–मानववाद, जासुसी पुँजीवाद र टेक्नो सभ्यतातर्फ उन्मुख विश्व समाजका समस्याहरूलाई मार्क्सवादले कसरी सम्बोधन गर्छ र दानवीय पुँजीवादका अन्त्यका उपायहरूबारे उनी स्पष्ट छैनन् ।
स्वयं अमेरिकाका प्रख्यात अर्थशास्त्रीहरू समकालीन पुँजीवादले असमानता, विभाजन र जातिवाद फैलाएको बताइरहेछन् । पुँजीवादसँग पनि सम्पूर्ण समाजको हल छैन, तर यो जिउँदोजाग्दो यथार्थ हो । जसबाट भाग्न नहुने उनको तर्क छ । तर मार्क्सवाद मात्र पनि सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर होइन । यसर्थ एउटा मार्क्सवादी अध्येताको आँखाबाट निकट इतिहासको विश्लेषण र भविष्यको केही खाकाको जानकारी पाठकले पुस्तकबाट पाउँछन् ।
प्रकाशित : पुस १९, २०७६ ११:२१
कानीन : कन्याको छोरो
पुस १९, २०७६ बिनु पोखरेल
केही वर्षअघिको कुरा । काठमाडौंमा रहेकी एक जना सहृदयी साथीको कोठामा बस्न गएकी थिएँ । बेलुकीको खानपिनपछि त्यो रात हामीले अनेक सामाजिक विषयमा अन्तरंग कुरा गर्दै आधा रात बितायौं ।
कुरैकुरामा साथीले वैवाहिक जीवनमाथिको आफ्नो अरुचि व्यक्त गरी । भनेकी थिई, ‘यार, म त बिहे गर्दिनँ । दुई वर्षमा विच्छेद गर्नुपर्ने सम्बन्ध म किन गासौं ?’ ऊ एक छिन रोकिई र उत्साहित हुँदै भनी, ‘विवाह नै नगरे पनि बच्चाचाहिँ जन्माउँछु ।’
उसको आवाजमा एकप्रकारको निश्चयभाव थियो । मैले भनेँ, ‘कसैले तँलाई रोक्न सक्दैन । यसमा तैँले जितिस् भने समाजलेतँलाई देवी भनेर पूजा गर्छ, हारिस् भने चरित्रहीन मान्छेका रूपमा चित्रण गरिरहनेछ ।’
यो कुरा उसलाई मैले वैदिककालीन नारीको दृष्टान्तसहित सुनाएकी थिएँ ।
त्यस संवाद यताको समयमा नेपालमा शुक्रकीट बरो (मागेर) गरेर पनि बच्चा जन्माउन पाउने कानुनी प्रबन्ध हुँदै छ । त्यो कानुन संसद्मा छलफल हुनै बाँकी छ । तर, के यस्तो प्रचलन अब समाजमा सुरु हुन लागेको हो ? यस्तो प्रचलनलाई पारिवारिक विखण्डन मान्नुपर्ने हो कि हाम्रो प्राचीन सभ्यतामै यस्ता चलन थिए ? एकपटक यतातिर विमर्श गर्नु आवश्यकता छ ।
आज हामीलाई एकदमै नयाँ लागे पनि पाँच/सात हजार वर्षपहिलेका वैदिक ग्रन्थहरूमै कुमारी आमाबारे उल्लेख छ । परिवार संस्कृतिलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा बनेका संहितासँगै यस्तो प्रचलनले सामाजिक मान्यता गुमाउँदै गयो । त्यसक्रममा नारी जातिले आफ्नो स्वतन्त्रतामा अलि बढी नै कुर्वानी गर्नुपर्‍यो ।
बाबुको सामाजिक पहिचानबिना आमा बन्ने कुरा चलिरहँदा आज हरेकजसो परिवारभित्र किन विद्रोह छ भन्ने मनन गर्नुपर्छ । यसरी विद्रोह गरिरहेको तप्का नियालेर हिजो समाज विकास क्रममा परिवार किन बनेको थियो भन्ने विषयमा चर्चा गर्न जरुरी छ । परिवार नहुँदा पनि मान्छे शारीरिक सम्बन्धमा हुन्थे । यौनाचार सृष्टिसँगै जन्मियो र पारिवार प्रथा समाजको विकास क्रममा जन्मियो । त्यसबेला परिवार हुँदैनथे, तर बच्चा त जन्मिन्थे । लोग्ने–स्वास्नी भन्ने संस्था थिएन । तर, सृष्टि चलेकै थियो । यसरी रहँदा–बस्दा जन्मिएका बच्चाहरूले स्याहार नपाउने, आमाहरू सुत्केरीमै मर्ने, बच्चा हुर्काउने सहयोगी नहुँदा उसको सहज लालनपालन नहुने र समाज स्वस्थ तरिकाले अघि नबढ्ने समस्या ज्यादा हुन्थ्यो ।
सन्तान उत्पादनमा सहभागी दुई जना सँगै भएपछि बच्चा हुर्काउन सहज हुने, ‘आफ्नो’ परिवार भएपछि लालनपालन पनि सहज हुने, भौतिक जीवन व्यवस्थित हुने, परिवारमा रहेर भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न सकिने भएकाले परिवारमा बस्ने संस्कृति अघि बढ्यो । यसै क्रममा सुरु भएको पारिवारिक परम्परा सात हजार वर्षसम्म चल्दै आएको छ । बिस्तारै विवाहइतर सम्बन्धलाई नैतिकताको कसीमा हेर्ने चलन चल्यो । यो परम्परा सुरु हुनुअघि यौनाचार र सन्तान उत्पादन नैतिक मूल्यभित्र समेटिएको थिएन ।
जब परिवार–संस्कृति थालनी भयो, तब त्यसलाई सामाजिक र सांस्कारिक मान्न थालियो । जो परिवारबाट बाहिर निस्क्यो, उसलाई सामाजिक मान्यता भाँडेको आरोप लगाइन थालियो । भलै त्यस्ता महिला–पुरुषलाई विद्वान् र विदुषीको स्थानमा राखेर आजैसम्म पनि पुजिन्छ । प्राचीन प्राकृत धर्मविपरीत नभएकाले र उनीहरूले आफ्नै पौरखले सामाजिक हैसियत कायम गर्न सकेकाले बिना–विवाह सन्तान जन्माउनेलाई आजसम्म पनि पञ्चकन्याका रूपमा पूजा गरिन्छ ।
प्राचीनकालका कुमारी आमाहरू सहजै वा त्यस्तो अधिकार पाएरै कुमारी आमा भए ? या उनीहरूले त्यसबापत सामाजिक कहर खेप्नुपर्‍यो ? एकपटक यसलाई पनि हेरौं ।
परिवारसम्बन्धी लिपिबद्ध भएको पहिलो मुलुकी ऐनमा कानुनी नागरिकको व्यवस्था थियो । यसले पनि समाजमा त्यसबेला कुमारी आमा थिए भन्ने बुझिन्छ । कुमारी आमाबाट जन्मिएको सन्तानलाई संस्कृत भाषामा कानीन भनिन्छ । शब्दहरू त्यसै बन्दैनन् । व्याकरणवेत्ता पाणिनिले आफ्नो अष्टाध्यायीमा कुमारी आमाको कोखबाट जन्मिएको सन्तानलाई कानीन भनिन्छ भनेर लेखेका छन् । कानीन संस्कृत शब्द हो । यसको अर्थ कन्याको छोरो भन्ने हुन्छ ।
अर्कोतिर समाजलाई मातृसत्ता र पितृसत्ता भनेर सत्ता–वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । तर, समाजमा न हिजो मातृसत्ता थियो, न आज पितृसत्ता छ । बरु समाज कहिले मातृप्रधान भयो भने कहिले पितृप्रधान । मातृप्रधान समाज लामो कालखण्ड चलेको थियो । यसलाई बुझ्न महाभारत र वैदिककाल हेरे पुग्छ । महाभारतमा पनि ‘कर्ण कानीन ब्यास’ भनी लेखिएको छ । यसको अर्थ हुन्छ— कर्ण र व्यास कुमारी आमाबाट जन्मिएका सन्तान हुन् ।
महाभारतका अरू केही अंश पनि हेरौं ।
माझीहरूका राजा केवटराजकी छोरी सत्यवती, जसले कुमारी छँदै पराशर मुनिसँगको संसर्गबाट व्यासलाई जन्म दिएकी थिइन् । महाभारतमा व्यास ऋषि भनेर चिनिने उनलाई सबैले पुज्य मानेका छन् । त्यसबेला पनि उनलाई सबैले सम्मान गर्थे । पछि सत्यवतीको विवाह शान्तनुसँग हुन्छ, जसबाट चित्रांगद र विचित्रवीर्य गरेर दुई सन्तान जन्मन्छन् । तर, विवाहपछि एकको अल्पायुमा र अर्कोको युद्धमा परेर मृत्यु हुन्छ । उनीहरूको विवाह अम्बिका र अम्बालिकासँग भैसकेको हुन्छ । दुवै अल्पआयुमै मरेपछि राजकाज चलाउन सन्तान चाहिएको हुन्छ ।
यस्तोबेला उनै सत्यवतीले आफ्नो विवाहभन्दा पहिले जन्मेको छोरा व्यासलाई दरबार झिकाउँछिन् र अम्बालिका र अम्बिकासँग समागम गर्न लगाउँछिन् ।
(यसलाई नियोग वा शुक्रकीट बरो भन्न सकिन्छ ।) अनि अम्बालिकाबाट धृतराष्ट्र, अम्बिकाबाट पाण्डु र दासीबाट विदुरको जन्म हुन्छ । (महाभारत, आदि पर्व, अंशावतरण खण्ड १०४ र १०५ अध्ययाय ) यसरी जन्माइएको बच्चालाई नियोग गरेर जन्माइएको भनिएको छ ।
अहिलेको हामीले भन्ने गरेको कुमारी आमा र शुक्रकीट बरो (मागेर या किनेर लिनु) गर्ने काम त्यहीबेला सहज प्रयोग प्रएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । यस घटनामा सत्यवतीले कुमारी हुँदै आमा भएको कुरा सार्वजनिक गरिन् भने शुक्रकीट मागेर पनि बच्चा जन्माइएको अर्को घटना छ ।
सत्यवतीको मात्र होइन, कुमारी छँदै बच्चा जन्माएकी कुन्तीले पछि पनि अरूकै नियोग अर्थात शुक्रकीट मागेरै बच्चा जन्माएको उल्लेख छ । पाण्डुबाट बच्चा हुँदैन । र, देवताको अनुग्रहबाट पाँच पाण्डवको जन्म भएको उल्लेख छ ।
(महाभारत आदि पर्व अंशावतरण खण्ड अध्याय ११०)
कुमारीमै बच्चा जन्माउने अर्की आमा हुन् कुन्ती । कुन्तीले बाल्यकालमै दुर्वासा ऋषिबाट पाएको मन्त्र प्रयोग गर्दा सूर्यदेव कुन्तीसामु आए । वशीकरण गर्ने मन्त्र प्रयोग गरेर बोलाएपछि त्यसै फर्किन नमिल्ने भनेर कुन्तीलाई बाल्यकालमै सूर्यदेवले सन्तान दिएको र बच्चाको नाम कर्ण रहेको कथा छ । यसको अर्थ कुन्तीले कुमारी छँदै बच्चा जन्माएकी थिइन् । तर, बच्चा जन्मेपछि भने लोकनिन्दाबाट डराएकी उनले बच्चालाई बाकसमा हालेर गंगामा बगाउँछिन् ।
वेदमा उल्लिखित पुरुरवा र उर्वशी मातृप्रधान समाजका पात्र हुन् । बच्चा जन्माउनकै लागि गन्धर्वसम्प्रदायकी एक सुन्दरी ल्याइएको हुन्छ, जो उर्वशी नाम गरेकी अप्सरा हुन्छिन् । तिनै अप्सरासँग राजा पुरुरवा प्रेममा पर्छन् । वेदमा पुरुरवा र उर्वशीद्वारा प्रणयका कुरा उल्लेख छन् ।
प्रेममा परेका पुरुरवाले अप्सरालाई पुरुरवाको बच्चा जन्माइदिने सर्तमा चार वर्षको निम्ति जाया (सन्तान जन्माउन सम्झौताद्वारा ल्याइएकी स्वास्नी) को रूपमा आफ्नो घरमा ल्याएका हुन्छन् । चार वर्षपछि सर्तअनुसार उर्वशी बच्चा छोडेर जान्छिन् । तर, पुरुरवा भने अत्यन्त विलाप गर्छन् । (ऋग्वेद आठ अष्टक, पाँच अध्याय, १–४ वर्ग)
यसरी वैदिककालदेखि निश्चित समयका लागि स्वास्नी बनाएर सन्तान पाउनेदेखि सन्तानका लागि मात्र सम्बन्ध राख्ने सबै खालका प्रचलन सहज थिए भन्ने देखाउँछन् यी घटनाले । यस्ता घटनाले अहिलेभन्दा वैदिक र महाभारतकालमा हाम्रो समाज फराकिलो र उदार चिन्तनबाट निर्देशित थियो भन्ने देखिन्छ ।
हिन्दु सभ्यतामा मात्र होइन, पश्चिमी सभ्यतामा पनि कुमारी आमाहरू प्रशस्तै थिए । त्यसको एउटा उदाहरण हुन्— येशुकी आमा मरियम । इसापूर्व पहिलो शताब्दीकी गलीलको यहुदी समुदायकी महिला थिइन् येशुकी आमा । उनले कुमारी अवस्थामै गर्भधारण गरेकी थिइन् । उनको गर्भबारे थाहा पाएर हुन लागेको विवाह पनि भाँडिएको थियो । पछि गर्भ रहेकै अवस्थामा जोसेफसँग उनको विवाह भएको र येशुको जन्म भएको प्रसंग बाइबलमा छ (बाइबल, नयाँ करार मत्तिको, एक अध्याय, १८–२४ पद ) । मरियमको मत्ताबारे कुरानमा पनि उल्लेख छ । जसले समाजको धारणा नै परिर्वतन गर्ने काम गरिन्, उनी जिससकी आमा थिइन् कुरानमा लेखिएको छ ।
ख्रिष्ट मात्र होइन, तत्कालिक ग्रीक, रोमन, सिरियन, पर्सियन, अफ्रिकन र मिश्री सभ्यताका देवता र नायकहरू स्त्रीबाट र देवता पुरुषबाट जन्मिएको देखाउँछन् । किनकि कुमारी आमाबाट बच्चा जन्मिएपछि सो पुरुषको खोजी गर्नुभन्दा अथवा पुरुष देखाउन नसकेको र देखाउन नचाहेको अवस्थामा बाबुचाहिँ अलौकिक भएको देखाइने चलन पूर्वीय सभ्यतामा मात्र होइन, पश्चिमा सभ्यतामा पनि देखिन्छ । त्यसरी बच्चा जन्माउनेलाई अहिलेजस्तो अपराध नभएर, अलौकिक शक्ति सञ्चय भएका स्त्रीको रूपमा पूजा गरिन्थ्यो ।
आकाश देवताका रूपमा उपासना गरिने मिश्री सभ्यताका एक प्रमुख देवता होरस पनि कुमारी आमाबाट जन्मिएका थिए । उनकी आमा इसिरिस थिइन् र बाबुचाहिँ देवता थिए भनिएको छ । यसको अर्थ कुमारी आमाबाटै जन्मिएका थिए होरस । पश्चिमका दार्शनिक प्लेटो, जसलाई देवताकै सन्तानको रूपमा ग्रीक सभ्यतामा वर्णन गरिएको छ— उनी इसापूर्व ४२९ मा एथेन्समा कुमारी आमाबाट जन्मिएका थिए ।
पश्चिमका विश्वविजेता भनेर चिनिने अलेक्जेन्डरलाई पनि देवताका छोरा भनेर चिनाइएको छ । जो पानी पार्ने, वज्र धारण गरेको, उर्वरताको देवताको रूपमा जुपिटर नामले चिनिन्छन् । रोमन मिथका नायक हर्कुलस देवताको सहयोगीको रूपमा देखापरेका छन् । यी दुवैका आमा मानिस र बाबुचाहिँ देवता हुन् भनी उल्लेख छ । डियोनाइसिस रोम ग्रीक सभ्यतामा कुमारी आमाबाट जन्मेका अर्का देवता हुन् ।
यी थिए विवाह परम्परा सुरु हुँदै गरेको समयमा महिलाको सामाजिक अवस्था । तर, जब पूर्ण रूपमा विवाह परम्परा सुरु भयो, तब आइमाईका स्वतन्त्रता पुरुषबाट नियन्त्रित हुँदै गए । नेपालमा लिच्छविकालदेखि राणाकालसम्म आइपुग्दा ५२ वटीसम्म स्वास्नी राख्ने चलन समाजमा थियो । परिवार संस्कृति बसेपछि र अझ त्यसमा पुरुषप्रधान बन्दै गएपछि पारिवारिक प्रथा आइमाईका लागि बन्धनयुक्त बन्दै गयो । उनीहरूको स्वतन्त्रता र शारीरिक स्वामित्वसमेत नियन्त्रित हुँदै गयो । हाम्रो प्राचीन समाजमा जस्तो स्वतन्त्रता र खुलापन थियो, त्यो बाँधिँदै गयो । तर, आज हामी समाजमा महिलाको स्थान कमजोर हुनुमा हाम्रो प्राचीन समाज र प्राचीन शास्त्रलाई दोषी ठान्छौं । वैदिक र ऐतिहासिक कालखण्डका ग्रन्थहरूको अध्ययनले हाम्रा प्राचीन मान्यताहरू स्त्रीद्वेषी थिएनन् । बरु त्यसपछि चलाइएका सामाजिक प्रथाहरूले महिलालाई पछि पारेको छ ।
बिहे नगरी सन्तान जन्माउने मेरी सखीको त्यस रातको अठोटलाई मैले वैदिककालीन नारी चरित्रको पुनरावृत्तिका रूपमा लिएकी छु ।
प्रकाशित : पुस १९, २०७६ ११:२०